Wararka Diyaaradaha • Wararka Duulista • Wararka Booqashada Caalamiga ah • kale • dib u dhiska safarka • Wararka safarka Ruushka • Seychelles wararka safarka • Wararka Dalxiiska • Wararka Gaadiidka • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Wararka Safarka • Sirta Safarka • News Trending
Duulimaadkeedii ugu horreeyay ee Aeroflot wuxuu ku soo xirmay Seychelles
Seychelles waxay soo dhaweyneysaa Aeroflot
Bogga ugu weyn » posts » Wararka Booqashada Caalamiga ah » Seychelles wararka safarka » Duulimaadkeedii ugu horreeyay ee Aeroflot wuxuu ku soo xirmay Seychelles
Diyaarad nooceedu yahay Aeroflot Boeing 777 ayaa saaka soo cago dhigatay garoonka caalamiga ah ee Seychelles, iyadoo calaamad u ah adeegii ugu horreeyay ee toos loo qorsheeyay ee u dhexeeya Moscow iyo Jasiiradda Mahé
waxaa lagu amaanay soo noqosho weyn kadib mudo 17 sano ah oo laga maqnaa jasiiradaha.
Diyaarad ayaa lagu soo dhaweeyay salaanta biyaha, muusikiistayaasha, qoob-ka-ciyaarka, iyo madadaalo.
Duulimaadka ayaa wadada u fureysa duulimaadyo laba-toddobaadle ah oo u kala goosha labada dal, safrayaasha Ruushkuna waxay hadda awood u yeelan doonaan inay si aan joogsi lahayn ugu duulaan jasiiradda loo socdo.
Duulimaadkii ugu horreeyay ee sideed saac ah 35 daqiiqo ayaa lagu amaanay 'soo laabasho weyn' maadaama Aeroflot ay 17 sano kadib ku laabaneyso jasiiradaha.
Duulimaadka waxaa soo dhoweeyey markii ay yimaadeen Wasiirka Arrimaha Dibadda iyo Dalxiiska ee Seychelles, Sylvestre Radegonde, Wasiirka Duulista Hawada, Dekedaha iyo Badda, Anthony Derjacques iyo saraakiil kale oo ka tirsan waaxda dalxiiska iyo duulista.
Tiro dhan 402 rakaab ah ayaa ka degay jawiga caadiga ah ee Creole iyadoo muusikiisteyaasha deegaanka iyo qoob ka ciyaarka ay bixiyeen madadaalo toos ah, ka dib markii diyaaradda ay dhex martay salaanta biyaha.
Duulimaadka taariikhiga ah ayaa wadada u furaya duulimaadyo laba-toddobaadle ah oo labada dal isaga kala goosha, safrayaasha Ruushkuna waxay hadda awood u yeelan doonaan inay si aan joogsi lahayn ugu duulaan jasiiradda loo socdo.
Duulimaadka soo celinta ayaa hadda ka tagi doonta Mahé caawa saacadu markay tahay 11.05 pm saacad duulaya 8 saacadood 50 daqiiqo. Ka dib markii si rasmi ah loo gooyay xargaha, Wasiir Radegonde wuxuu muujiyay sida uu ugu faraxsan yahay Aeroflot soo laabashadiisa iyo dib u soo celinta xiriirkii hawada ee labada dal.
Wuxuu ku salaamay shirkadda duulimaadkan muujinta weyn ee kalsoonida leh ee la xiriirta halka ay ku socoto xilli ay aragtay wadooyin aan la tirin karin oo ka jira warshadaha.
Dib u bilaabida duulimaadyada tooska ah ee ka imanaya Moscow ilaa Victoria waxay ka markhaati kacaysaa kalsoonida ay shirkadda diyaaradaha qaranka ee Ruushka ku leedahay warshadaha dalxiiskeena Seychelles waa meel aad looga doondoonay Ruushka iyo Barwaaqo Sooranka Dawladaha Madaxa Bannaan (CIS). Suuqa Ruushka wuxuu had iyo jeer ahaa mid faa'iido u leh Seychelles, oo ka muuqda 7-da meelood ee safarka sanad walba. Waa suuq wax soo saar badan leh, celcelis ahaanna joogaa 9 ilaa 13 habeen. Laakiin soo booqdeyaasha soo booqda waxaa caqabad ku noqday la'aanta duulimaadyo toos ah oo ka yimaada Moscow, "ayuu yiri.
Wasiirka Radegonde ayaa ku tilmaamay taabashada diyaarada inay tahay waqti qurux badan oo farxad u leh dalka, isagoo intaa ku daray soo celinta duulimaadka inay gacan ka geysaneyso soo kabashada warshadaha dalxiiska ee Seychelles.
Wasiir Radegonde wuxuu xusay in suuqa Ruushka uu ahaa mid faa’iido badan leh wuxuuna sheegay in duulimaadka tooska ah uu gacan ka geysan doono dardargelinta iyo sii kobcinta.
Markii la bilaabay duulimaadyada laba-toddobaadlaha ah ee Aeroflot, waxaan ku rajo weynahay inaanan dib u soo celin karin oo keliya, laakiin aan kordhin doonno, saamigayaga Ruushka iyo suuqa CIS. Waa awooddeena inaan sidaas sameyno. Waan sameyn karnaa haddii aan si wada jir ah u wada shaqeyno koox ahaan - dowlad iyo shirkadaha gaarka loo leeyahay. ”
Aeroflot hadda waxay ku biireysaa afar diyaaradood oo kale, kuwaasoo dib u bilaabay duulimaadyadoodii Seychelles, halka lix kale la filayo inay soo laabtaan inta u dhaxeysa Abriil iyo Oktoobar 2021.
Aeroflot waxay sidoo kale muujisay sida ay ugu faraxsantahay inay dib ugu soo laabato wadadii Seychelles.
“Aad ayaan ugu faraxsanahay inaan noqono diyaaradii ugu horeysay ee reer Yurub ah ee dib ugu soo laabata Seychelles sanadka 2021 iyadoo adeeg joogto ah u dhaxeysa Moscow iyo Mahé, taas oo shaki la’aan ah mid ka mid ah safarada ugu quruxda badan uguna safarka badan adduunka,” ayuu yiri Agaasimaha Suuqgeynta shirkadda. , Anton Myagkov.
“Adeegga cusub ee Seychelles runti wuxuu iftiiminayaa khadka ballaaran ee marinka Aeroflot. Shirkad diyaaradeed oo adeeg buuxa leh, waxaan si fiican ugula jaan qaadi doonnaa badeecadeenna sare iyo adeegga duulimaadka ee dalxiiska jasiiradda Seychelles. ”
Mr. Myagkov wuxuu intaas ku daray in baahida rakaabka hadda ee adeegan ay horeyba uga badatay dhamaan wixii ay filayeen, taasoo keentay in laga baxo duulimaadkii ugu horeeyay maalmo gudahood. "Tani waxay Aeroflot u suurta galisay inay kordhiso inta jeer ee duulimaadka laba duulimaad usbuucii laga bilaabo Axadda 09ka Abriil," ayuu yiri.
Isaga oo ka hadlaya duulimaadka cusub, Madaxa Fulinta ee Guddiga Dalxiiska Seychelles, Sherin Francis, ayaa sidoo kale goobjoog ka ahaa soo dhaweynta duulimaadka Aeroflot, wuxuu sheegay in wararka ku saabsan soo noqoshada Aeroflot ay la kulmeen xamaasad aad u badan ganacsiga Seychelles.
“Waxaan ku faraxsanahay inaan soo dhaweyno adeeggan cusub ee xeebaheena. Ruushku waa mid ka mid ah suuqyadeenna ugu sarreeya asal ahaan waxaanan filaynaa jidkan cusub iyo isku xidhka tooska ah inuu ballaariyo gaadhitaankayaga suuqa iyo gobolkaas, ”ayay tidhi.
Waxay intaas ku dartay in kordhinta awooda kursiga ay tahay mid muhiim ah waxayna hoosta ka xariiqeysaa kalsoonida shirkada ay ku qabto wax soo saarka Seychelles, oo ah meel aad loo raadinayo.